ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ဘလော့ရွာ
ဘယ်နှယ့် ဂုရုကြီးတုန်း။ ဂုရုလို့ဆိုရင် ဆာဒူးပုံပဲ မျက်စိထဲမှာ မြင်တတ်တယ် :D သြော်ဇီမှာ လူနေ ရပ်ကွက်တွေမှာတောင် ဆောင်းတွင်းဆို ည ၆ နာရီကျော်ရင် မှောင်မဲနေတာပဲ။ စင်္ကာပူတို့လို ညဖက် ထိန်ထိန်ညီး မဟုတ်ဘူး။
မာမီမျိုးက ဘလောဂ့်ရွာ အလည်ထွက်သကိုး
နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုး ကြိုးတစ်ချောင်းလေး ၀တ်ပြီးတော့ပေါ့
မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ် အတော်ကို လန်းနေမှာ သေချာတယ်..
နှုတ်ခမ်းတလန် ပန်းတလန်နဲ့ ပုံကို :P
ဆြာလေး မေဓာဝီ said...
ဆရာလေး ဆွမ်းခံတာကိုတောင် မရှောင်ပါလား မာမီမျိုးရယ်။ ဒီမှာ ထီးဖြူ ဖိနပ်ပါး အရပ်တကာလှည့်ပီး ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆွမ်းခံရထားတာလေးကိုမှ အားမနာ လာတောင်းလို့ကတော့ ကန်တော့ပါသေးရဲ့ပဲ ... :P
:D,,, :D ,,,ဟား ဟား ရီလိုက်ရတာ မောင်မျိုးရယ်။ ရေးလည်း ရေးတတ်ပါ့နော်။ လူကြုံရင် လေဒီဂါဂါလိုအုပ်ထုတ်ဒီဇိုင်း မှာလို့ ရမလားဟင်,,,, :D ဒီမှာ အပြင်ထွက်ရင် နေအရမ်းပူလို့ ပါဗျ။ ပို့ ပေးနော်,,,,မောင်မျိုး။ :P
မာမီမျုိုးရယ် လည်လည်သွားတာလဲ သွားပေါ့..
မာမီမျိုးတို့ ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ဆိုတော့
ဟားဟား.. စဖတ်ထဲက ပြုံးစိစီ မာမီဇော် မှာဘီယာဗိုက်တော့ တော်တော်ရီချင်နေပြီ. ရုံးမှာမို့
ဟယ် . . . မယ်မျိုးရယ်။
ကျုပ်နေမကောင်းဘူးအေ ( ခေါင်းမူးနေတာကို ပြောတာပါ ) အပြင် သိပ်မလိုက်နိုင်ဘူးတော် ( ရှော့ပင်ပါ ) ၊ များက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဗိုက်က ကြီးရမှာလဲ . . အဲဒါ ဖက်ရှင်ဟဲ့။ သူများတွေများ ဗိုက်ကြီးအောင် မနည်းလုပ်နေရတာ ( ဘီယာဗိုက်ကို ပြောတာပါ ) သူများတွေများ အားတွေတောင်မှ ကျလို့ . . . (အားကျမှာပေါ့ . . . မီးမလာလို့ နေမှာပေါ့။ )
လူဇီုးတွေနော်. . . . ဟွန်း . . .
ဟားဟား..ရီလိုက်ရတာ ညီရေ့....၊ စိတ်ကူး ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ရွာပတ်ပြီး လူတကာကို ရီအောင် လိုက်လုပ်နေတာကိုး၊ အိုင်ဒီယာလေး သဘောကျတယ်၊
ပိုက်ဆံတော့ ချေးချင်ပါတယ် ညလေးရယ်၊ ဒါပေမယ့် သူ့တိုင်းပြည်က ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေလို့-တဲ့၊ ဟိုတနေ့က ကဒါဖီက အကုန်ပြန်လာ ထုတ်သွားတာနဲ့ ပြောင်သလင်းခါသွားပြီ၊ သူ့ပိုက်ဆံတွေကို အီဂျစ်နဲ့ တူနီးရှားမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားမိလို့ အခုအကြွေးတင်နေ တာနဲ့ ကားလည်း ရောင်းပြီး ဆပ်လိုက်ရတယ်၊ ညလေး ရဲ့ အကိုကြီးက နာမည်လည်း မကြီးပဲ ထမင်းငတ်နေ တာကွဲ့၊ ရွာအပြန် ဟိုနေ့ကကျန်တဲ့ ချော့ကလက်လေးပဲ ယူသွားတော့နော်...။ :D
ဒါနဲ့ ဟိုကောင်မ အကြောင်းပေါရဦးမယ် ..သိလား...
ဟား ဟား ....ဂွတ်၏ ..
မောင်မျိုးရေ... လာဖတ်ပြီး တခွိခွိနဲ့ သဘောကျလို့ ရယ်မိတယ်။ အဲ့လို ပို့စ်လေးတွေ နောက်လည်း ရေးနော်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်စရာလေး။ ခင်ရာမင်ရာ လူတွေကို စနောက်ထားတာ အပာင့် ရို့စ်ကျ မပါဘူး....။
မိုးပျံမအခန်းထဲ ၀င်လိုက်ရင် အဲလိုချည်းပဲ
ဟိုကောင်မလေး မေပယ်ကတော့ အသဲတွေရောင်းစားပစ်တယ်ဆိုလား:P
အော... ဖဘက မေးလ်ဝင်တာလာ ကိုအေးဆေး ဖတ်မလို့လုပ်နေတာ... အခုနင့်အိမ်မှာပါမြင်တော့ ညမှ အေးအေး ရွာထဲလှည့်မယ်လုပ်တာ.. အခုမှ သိတယ် ညည်းက ကျုပ်တို့ အတင်းထုတ်ထားသကိုး.. ကောင်မ ကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ ဖလမ်းဖလမ်းထနေတာကို... နေဦး နောက်တခါကျမှ လေဒီဂါဂါ ခမောက်ပေါ်ကနေ ဘီယာနဲ့ကိုလောင်းချလိုက်ဦးမယ်.. သားစိမ်း ငါးစိမ်းတွေက အသုဘ ကမ္မဌာန်း ရှုတာ သင်္ချိုင်းမသွားရဲလို့. ဘီယာဘူးခွံတွေက မကောင်းတဲ့ ဒီသူရာရည်တွေ လူတွေ ဘာလို့သောက်ပါလိမ့်လို့ မြည်းကြည့်ရင်း လက်လွန်သွားတာ... သားတွေကတော့ အတွေ့ကို လွန်ဆန်နိုင်ရဲ့လား စမ်းရင်းနဲ့ ဈာန်လျောတာဟေ့.. ညည်းလုပ်တာနဲ့ ငါ့ကို အထင်တွေကြီးကုန်ဦးမယ်.. အစင်လေး သုံးယောက်ထဲပါဟယ်.. ငါ့မွေးစားသားတွေပေါ့အေ။